Facebook : Hitory ny “Ino vaovao Toamasina” ny faritra atsinanana - Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2018 → janvier → 25 → Facebook : Hitory ny “Ino vaovao Toamasina” ny faritra atsinanana
“Misy lalàna eto”. Isan’ny miteraka olana eo amin’ny mpanjifa sy ny jirama ny mbola tsy fisian’ny herinaratra amin’ireo fokontany maro eto Toamasina taorian’ny fahasimbana nateraky ny rivo-doza AVA. Maro noho izany ny mpiara-monina miara-manangom-bola 5.000 ariary entina hanambazana ireo mpiasan’ny Jirama hamerina ny herinaratra amin’izy ireo. Niteraka fanehoan-kevitra tao anaty tambajotran-tserasera “facebook” an’ny “vondrona Ino Vaovao à Toamasina” ity tranga ity, ka tsy nahafaly ny Jirama sy ny faritra atsinanana izay voatonona tao anatiny noho ny voalaza fa ny lehiben’ny faritra mihitsy no mandrisika ny jirama amin’ny famporisihana ny mpiasan’ny Jirama maka io vola io. “Tany misy lalana eto” ka hitondra ny raharaha eo anivon’ny fitsarana ny lehiben’ny faritra Talata Michel, satria fanohintohinana ny filaminam-bahoaka sy fanasoketana fanjakana ary fanelezana vaovao tsy marina no handraisan’izy ireo izany.
Tsy tratra ny alarobia. Baiko nataon’ny filoha teto Toamasina taorian’ny fitarainana nataon’ny vahoaka voarainy tamin’ny fahatongavany ny zoma sy ny sabotsy teo, sy niatrehany ihany koa ny fahoriam-bahoaka tamin’ny fisian’ny fahatapahana in-7 nitranga nandritra an’io zoma io, fa tsy maintsy miverina 100% ny famatsiana herinaratra ho an’ny vahoaka ny alarobia. Niaiky anefa ny tale jeneraly lefitry ny Jirama tonga eto Toamasina mihitsy manara-maso ny fanarenana, fa tsy ho tratra ny alarobia izao ny famerenana tanteraka ny famatsiana herinaratra isan-tokantrano. Tena mbola olana ny ao Androranga noho ny fahasimban’ny “transformateur”, ny fahatapahan’ireo andrin-jiro marobe ao Ambalamanasy – Andranomadio – Tanandava – Ampilaolava – ary Ivoloina. Efa tonga avokoa ireo fitaovana hanaovana ireo asa rehetra ireo ankehitriny raha ny voalaza.
Tsy nanda sy tsy nanaiky ny fisian’ity fakana vola ataon’ny mpiasan’ny jirama ity anefa izy ireo, saingy miandry porofo avy amin’ny vahoaka kosa hanafaizana ireo zatra ny lalan-dririnina, satria miroso amin’ny fanovana noho ireo laza ratsy nananany ny jirama izao, hoy ny mpitantana. Efa nampiantso ireo lehiben’ny mpitandro ny filaminana sy ny tompon’andraikitry ny fitsarana eto Toamasina ny lehiben’ny faritra atsinanana Talata Michel mikasika ity fitoriany ataony ity.